Liverpool oo isaga baxday raacadada loogu jiro Jadon Sancho & Labada Kooxood ee ka dhisan Ingiriiska oo isugu soo haray loollankiisa – Gool FM
(Yurub) 01 Abril 2020. Kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ayaa culeys badan wajaheysa maadaama kooxaha ka ciyaara Premier League ay ku dagaallamayaan saxiixa xiddigooda Jadon Sancho.
Kooxaha kala ah; Manchester United iyo Chelsea ayaa si toos ah ugu hardami doona saxiixa Sancho, balse waxaa loollankooda ka dhalan kara inuu sare u kaco qiimaha laacibka reer England.
Dortmund ayaa isaga difaaceysa kooxaha doonaya laacibkeeda qiimo lacageed aad u sarreeya, waxaana taas ay horseed u noqoneysaa inay ku kala awood roonaadaan kooxaha Ingiriiska ka dhisan saxiixii Sancho.
Liverpool oo ka mid ahayd kooxaha la la xiriirinayay laacibka garabka ka ciyaara, balse warar laga helayo guudaha Reds ayaa tilmaamaya in guud ahaan kooxda aysan qorsheynayn soo qaadashada xiddigga BVB.
Taasi waxay gogol xaar u noqonaysaa in Man United iyo Chelsea ay keli ku noqdaan raacdada loogu jiro soo xero-gelinta Jadon Sancho.
Red Devils ayaa lagu soo warramayaa inay la xiriirtay wakiilka 20-sano jirkaan, balse weli wax dalab rasmi ah uma aysan gudbin kooxda Jarmalka ka dhisan, waxaana la filayaa marka suuqa kala iibsiga uu furmo inay si toos ah ula xaajoodaan kooxda uu ka tirsan Sancho ee Borussia Dortmund.
Halka Blues oo xiddiggan la la xiriiriyay saxiixiisa bishii Janaayo ay ka caga-jiideyso qiimaha sare ee la dul dhigay iibkiisa.
Isku soo wada duuboo, Jariiradda Mirror Football ayaa qortay in Reds aysan marnaba damcin laacibka qaranka Ingiriiska u ciyaara, maadaama ay saddexda hore ee kala ah; Mohamed Salah, Roberto Firmo iyo Sadio Mane heshiisyo waqti dheer kula jiraan Kooxda ku ciyaarta garoonka Anfield.
Majaladda ka soo baxda Ingiriiska ayaa xiganeysa ilo ka tirsan shaqaalaha kooxda, kuwaasoo caddeeyay in Sancho uusan bartilmaameed u ahayn Liverpool.